Xildhibaannoow: “Axdi malaha Xabashidu lagu Aamminaayee”
Horta Xabashi mala aammini karaa? “fiihaa qowlaan” oo ah labo ra’yi baa laga qabaa. SRRC iyo xulafadeedu waxay u arkaan in la aammini karo; Soomaalida inteeda kalana inaan la aammini karin. Maanta aan talo fiican siiyo xildhibaannada iyo SRRC-da:
Xildhibaanno, Xabashidu waxay la jirtaa ninkii la dagaala ninkii ay Xabashida is qabtaan. Tusaale usoo qaado taageeradii ay siisay kuwii C/Qaasim ka horyimid. Tan labaad waxay xiriir dhow la samaysataa ninkii reerka u hara. Tusaalaha arrintan loo soo qaadan karaa waa wixii ka dhacay Puntland, Gedo, iyo Baay iyo Bakool. Arrintani waxay i xasuusinaysaa nin Maraykan madoow ah oo qabanqaabiya feerarka “ a boxing promoter” oo la yiraahdo Don King. Mr King ayaa habayn feer culus dhacayey, soo socodkiisii gaarigiisa qaaligaa ee limoosiinka “limousine” kusoo qaaday horyaalkii feerka culus ee waqtigaas waa Joe Frazier oo Soomaali badan ugu dhawaaqdo Joon Farays. Mr Frazier wuxuu habeynkaas la ciyaarayey feeryahanka kale ee caanka ah ee George Foreman oo habaynkaas laftiisu rabay inuu horyaalnimada ka qaado Joe. Siduu George Foreman rabay baa dhacday oo wuxuu dhulka dhigay Joe Frazier dabadeedna halkaas buu ku qaatay suunkii dahabka ahaa. Waxaa dadkii ka yaabiyey Don King oo markii hore horay usoo qaaday Joe Frazier wuxuu markii dambe qaaday ninkii guulaystay ee ahaa George Foreman! Sheekada Zenawi waa sidaas. Hogaamiyayaasha Soomaaliyeed Zenawi lama dhalan. Haddii mid Baay iyo Bakool joogay oo isku fiicnaayeen laga raayo wuxuu la jiraa kan xoogga roonaaday. Dhulka Soomaalida oo dhan sidaas buu ula dhaqmaa. Arrinta Kismaayana waa sidoo kale. Dad baa u qaba in Zenawi Moorgan iyo Barre Hiiraale kala jecelyahay! Hadduu Moorgan adkaado waa suu rabay. Haddii laga adkaado wuxuu soo sharraxayaa mid kale oo Gedo jooga ama Barre laftiisa buu heshiis la gelin.
Moi, madaxweynihii hore ee Kenya waxaad mooddaa inuu i xasuusinayo meerisyo uu gabyaa ku lahaa:
Nabi Muuse tii soo martaa maanta la hayaaye
Ninkii gaalku muudiga ku raray oo miskaha buuxshay
Maqligiisa waa tuu dilay meel aan la arkeyne
Doqontii cid kale maamushaa ma laha iimmaane
Yaalaaba waa gargaar meel maruu dib ugu meershaaye
Mushrikii Fircoonna u tegyoo maaddadii u sheegye.
Waligiin ma aragteen qof cadowgiisii gumaysanayey gabbaad ka dhiganaya iyo gacal? Nin ku howlan halaaagga waddankaaga sidee uga filaysaa inuu ku heshiisiiyo? Alleylehe murtidii Soomaaliyeed guud ahaan iyo tii Xabashida laga yiri dhego awdan bay ku dhaceen. Bal u fiirso faraqa u dhaxeeya dadkii fidrada ku dhashay oo qaarkood hal-abuurka ahaa sida Ilmo Gahayr oo kale. Ingiriiska oo Waqooyiga Soomaaliya haysta markii dagaalkii labaad socday ayaa inta Ina Gahayr siiyey lacag iyo dhar yiri waxaad gabay ku riddaa Jarmalka. Ina Gahayr Allaha u naxariistee wuxuu yiri:
Maxaa labo gaal oo abtirsiinyo ii gudboon
Midna aan gar u siin midna aan u guhaadin
England baa gubanaysa maxaa iiga gidhiisha!
Ina Gahayr side Xabashida u arkayey? Wuxuu gabay ku bilaabay:
Wallee ama gufaacada ka qaday guga la eegaayo
Wallee ama Guhaadoow waxaan geysto lala yaabye
Ama aan Gaal madoow Harar ku dilo Giiba laga noole.
Maantadan aan maqaalkan qorayo waxaan arkayey mid iska dhigaya inuu “Somalilander” yahay oo lahaa Somaliland guul; Israa’iil guul! Ninkani wuxuu ammaanay Itoobiya isagoo leh hadday Somaliland goosato waxaa beenoobaysa riyadii Soomaali weyn. Maqaalkaas oo Ingiriis ku qoran ka fiiri Somaliweyn. Cinwaankisdu wuxuu ahaa: “a letter to Israel” ama saas oo kale.
Waxaad la yaabaysaa qof Soomaaliya jooga ama dibad oo haddana Zenawi ammaanaya! Haddaad tiraahdo muxuu kuu qabtay kama jawaabi karo.
Bal fiiri markii gabyaagu lahaa:
Maanaa mindiyo ley qarshaa la igu qali doono.
Allaha u naxariisto raggaas gabayadaas tiriyey. Miyeyse arkeen dagaal-oogayaal iyo calooshood-u-shaqaystayaal? Mar kale waa teey Soomaalidu lahayd:
Axdi malaha Xabashidu lagu aamminaaye.
Hogaamiye-kooxeedyada Soomaaliyeed baa hadda na baraya in Xabashidu aysan ahayn tii hore ee ay tahay ehel raba in arrimaheennu toosaan.
Dadka Soomaliyeed waa dad iska jecel quraafaadka. Qaar waxaad arkaysaa leh hogaamiyahayaga waa la wataa oo waa nin diin neceb marka inuu ku soo baxo madaxweynanimo ayaa la arkaa. Xildhibaannadana waxay dhaheen dowladahaas ayaa uga dhammaynaya inay isaga doortaan! Laakiin waxaa arrintaas isku fuuqsaday markii IGAD iyo beesha Caalamkuba soo saareen intaas oo xabad-joojin, inaan hub Soomaaliya la keenin iyo inaan dagaal-oogayaashu Kenya ka bixin laakiin waxaasoo dhan waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay. Hadday IGAD iyo Beesha Caalamku wax ka qaban weyday hal ama dhowr dagaal-ooge sidee shacabka Soomaaliyeed wax uga qaban karaan?
Waxaan Soomaalida xasuusinayaa inay jalleecaan waxa ka socda Ciraaq. Dowladdee ka xoog weyn Maraykan iyo Ingiriis? Maxaa Ciraaq usoo kordhay? Wax aan burbur waddan dhan ahayn lama hayo. Marka waddankeenna cidna marti uguma nihin laakiin xildhibaannoow noo doorta qofka ugu macquulsan dadkaas madaxweynanimada isu soo taagay. Shacabka Soomaaliyeed idiin ma dirsan waxa Maraykan, reer Galbeed ama Itoobiya rabto ee waxaan idiin dirsanay waxa annaga noo danta ah. Haddaad tiinna ka soo baxdaan waxaan filayaa in tan shacabka iyaga loo daayo. Marka Ciraaq oo Shiico iyo Sunniba leh haddii Maraykankii geli waayey magaalooyin yar yar, maxaad uga baqaysaan Itoobiya iyo wax la mid ah hadday ku soo xad-gudubto waddankeenna?